Tababaraha Kooxda Barcelona Ee Ernesto Valverde Oo Sababeeyay Bar-Barihii Ay Kooxdiisu La Gashay Getafe – Kooxda.com
Home 2018 February Spain, Wararka Maanta Tababaraha Kooxda Barcelona Ee Ernesto Valverde Oo Sababeeyay Bar-Barihii Ay Kooxdiisu La Gashay Getafe
Tababaraha Kooxda Barcelona Ee Ernesto Valverde Oo Sababeeyay Bar-Barihii Ay Kooxdiisu La Gashay Getafe
Tababaraha Kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa sheegay sababta ka dambaysa bar-barihii ay kooxdiisu la gashay kooxda Getafe kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga kana dhacay garoonka Camp Nou kaas oo ay ku dhaafi waayeen bar-baro 0/0 ah todobaadkii 23-aad ee Horyaalka La Liga.
Ernesto Valverde ayaa sheegay in jadwalka kulamada ay sabab u ahayn in ay ka badin kari waayaan kooxda Geatafe kuwaas oo bar-bar la galay laakiin wali sii wata rikoorkooda guuldaro la,aanta.
Kooxda Barcelona ayaa soo bandhigay qaybtii ugu xumayd ee ciyaartii Getafe ee xilli ciyaareedkan iyada oo ku fashilantay in ay hal laag ku laagto goolka Getafe marka laga reebo goolkii Luis Suarez ee la diiday.
Goolhayihii kooxda Getafe ee Vicente Guaita ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta kaligii la ciyaaray isaga oo goolal cadaan ah ka badbaadiyay xiddigaha Barcelona.
Waxa uu ahaa kulankii 12-aad ee ay Barcelona ciyaarto 39 maalmood gudohood tan iyo markii ay xiddigaha Barcelona ka soo laabteen fasaxii jiilalka waxana uu Valverde qirtay in daal ay xiddigihiisu qabeen qayb ka ahaa bar-barihii ay la galeen Getafe.
“Waxa naga maqanaa dhiiranaan iyo waliba daal la,aan gaar ahaan qaybtii hore ee ciyaarta”ayuu Valverde u sheegay fcbarcelona.com.
“Getafe waa koox kaa joojinaysa in aad ciyaarto sidaa darteed uma dhawaan kartid goolkooda, markii ay ciyaartu socotay waanu weeranay inkasta oo aanu qabanay dadaalkayagii ugu fiicnaa waanu awoodi waynay in aanu dhaafno, waxa ay goolkooda u difaacdeen si fiican”.
“Waxa aanu ciyaarnay bil mashquul badan waxa aanu dhawaan gaarnay final”.
“Ma Badin karno kulan kasta waxa aanu ku ciyaarnaa % maalin kasta, taasina waa sababta uu todobaadka dambe kulan la,aantiisu noogu yahay wakhti fiican si aanu u soo kabsano”.